Ungayichaza Kanjani Ibhotela - Amathiphu Nemibono Emihle!
irayisi elomile kumthamo welayisi ophekiwe
singakanani isipinashi esisha esilingana neqhwa
inyama iresiphi yenkomo nobhontshisi omnyama
Ungayichaza Kanjani Ibhotela
Kucaciswe Ibhotela yenza konke kunambitheke kangcono, futhi ikuvumela ukuthi upheke ngokushisa okukhulu ngaphandle kwengozi yokusha. Kuyidiphu efanelekile isikhuphashe nokunye ukudla kwasolwandle futhi! Sebenzisa ibhotela ecacisiwe yisona sigqoko esifanele I-Popcorn … Azisekho izinhlamvu ezinomunyu (ngoba amanzi asusiwe kuwo)!
ukubilisa kanjani amaqanda ku-denver
Inikeza ukunambitheka okugcwele, okucebile imifino esusiwe , futhi mellows ukushisa okubabayo kwalezi zokupheka.
Yini Ngempela Ibhotela Elicacisiwe?
Ibhotela ecacisiwe yiketshezi elihle eliphuzi ozibona ezithombeni. Ngokufana ne-ghee e-cuisine yase-India (ehlukile kancane kepha esondele), ivela kubhotela ojwayelekile onosawoti noma ongenawo usawoti owuthenga esitolo.
ukukhishwa kwemvelo ebhodweni elisheshayo
Ibhotela lakhiwa ukudla okuqinile kobisi, amafutha namanzi. Uma kuphekiwe, ususa okuqinile kobisi bese usala namafutha amnandi njengegolide.
Umsindo uyinkimbinkimbi? Ungakhathazeki! Kulula kakhulu futhi kuyashesha impela.
Ibhotela livutha kalula ngoba okuqinile obisi oluqukethe akukwazi ukumelana nokushisa okuphezulu. Kwesinye isikhathi ufuna lokho kunambitheka kwebhotela okunsundu, kepha kwezinye izikhathi ufuna ukuwosa, ukuthosa noma ukuchelela ibhotela eliphakeme nelisobala kungaphandle kombuzo. Yilapho ibhotela elicacisiwe liba ngumlingani wakho wokupheka.
inkukhu enchiladas ku-recipe crock pot
Esinye isizathu sokucacisa ibhotela ukuthi liyayivimba ukuthi ingabi rancid. Ungagcina ibhotela ecacisiwe kuze kube unyaka esiqandisini, noma ekhabethe kuze kube izinyanga eziyisithupha. Ngoba kungamafutha amsulwa, ngeke onakalise.
Ukwenza Ibhotela Ecacisiwe
Nakhu ukuthi ungathola kanjani ibhotela ecacisiwe:
Qhafaza ibhotela epanini elincane ngokushisa okuphansi kuze kube yilapho liqala ukuqhuma, lisusa amagwebu phezulu.
Qhubeka upheke phansi uze uyeke ukubhuza futhi uketshezi kucacile.
Lapho konke ukudla okuqinile kobisi sekuphekiwe futhi kushonile, thinta ipani bese uthela ngokucophelela amanoni engilazini noma embizeni ye-ceramic, ushiye okuqinile ngemuva. I-Cheesecloth noma izihlungi zekhofi ziyasiza lapho kwenziwa ibhotela ecacisiwe.
Epholile futhi igcinwe esiqandisini noma ekhabethe.
Ibhotela elicacisiwe kufanele ligcinwe embizeni evalwe ngci. Kuzoqina kancane esiqandisini futhi kuzohlala kuncibilikile ekhabetheni noma kutafula lokusetshenziswa ekuphekeni ezinyangeni ezizayo.
Yisebenzisele i- imfanzi scampi , iziyaluyalu noma ukugcobhoza izimbaza, izimbaza, nama-oysters.
Zama ibhotela ecacisiwe kulezi zokupheka ezimnandi
I-Asparagus elula eyosiwe (eneParmesan) - isilimo esinengono emnandi edliwayo uhlangothi oluphelele!
Ummbila weMicrowave ku-Cob - ingcono kunebhotela elijwayelekile
Ungayipheka Kanjani Ilayisi - okumnandi kwilayisi
Uqathe Ojuwe Oju - ukwengeza okuhle
Ama-leeks aqoshiwe eParmesan - Isifutho nje!
Isikhathi sokulungiselela5 imizuzu Isikhathi Sokupheka25 imizuzu Isikhathi Sokupholisa5 imizuzu Isikhathi Esiphelele35 imizuzu Izinkonzo12 wezipuni UmbhaliUHolly Nilsson Kuhle ekuphekeni kwamaNdiya noma idiphu ephelele ukudla kwasolwandle nakho! Phrinta Phina
▢1 iphawundi ibhotela
indlela yokwenza mnyama izinhlanzi esitofu
Beka ibhotela epanini elincane bese uncibilika ngokushisa okuphansi.
Pheka ngokushisa okuphansi uqinisekise ukuthi ibhotela alihluphi ngenkathi ugoqa ngobumnene amagwebu phezulu. Lokhu kungathatha isikhashana, bekezela.
Lapho igwebu selisusiwe futhi usale noketshezi oluphuzi, vumela luphole / luphumule cishe imizuzu engu-5-7. Uzobona enye inzika ezansi (lawa aqine ubisi).
Faka umugqa ohlunga ngesihlungi sekhofi noma i-cheesecloth bese uthele ngobumnene uketshezi lwegolide esitsheni ngenkathi ushiya noma yikuphi okuqinile ngemuva.
Ifriji icacise ibhotela kuze kube yinyanga eyodwa.
Amakholori:271,Amakhabhohayidrethi:1g,Amaprotheni:1g,Amafutha:31g,Amafutha agcwalisiwe:19g,Cholesterol:81mg,I-Sodium:270mg,Potassium:9mg,Ushukela:1g,Uvithamini A:945IU,I-calcium:9mg
Igama elingukhiyeUngayichaza Kanjani Ibhotela InkamboKanjani KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .